Myanmar Update News – Page 181 – News
News-Update | April 25, 2020
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း ကမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲ ဝန်ဆောင်မှုများအား ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားမည် အသွားအလာကန့်သတ်တားမြစ်ခြင်း (Lockdown) ပြုလုပ်ထားသော ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ ၉ ရပ်ကွက်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းဘဏ်ခွဲ ဝန်ဆောင်မှုများအား ခေတ္တခဏရပ်ဆိုင်းထားမည် ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘောဇဘဏ်မှအသိပေးကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လူထုအား COVID-19 ကူးစက်မှုနှုန်းကို လျှော့ချနိုင်ရန်အတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေး ကော်မတီမှ (၂၄)
ခြေထောက် ထုံကျဉ်၊ ဆံပင်တွေကျွတ်၊ မျက်မှန်တွေ တပ်နေရလို့ စိတ်ညစ်နေသူများအတွက် ဆေးစွမ်းကောင်း ရှယ်ပြီးသိမ်းထားသင့်တဲ့ဆေးနည်းလေးပါ။ ပြုလုပ်ရတာ လွယ်ကူပါတယ် ယနေ့ည လက်တွေ့စမ်းကြည့်တာ ဆား (၅၀ )သားလောက် ရေနွေးနဲ့ခြေထောက်ကို နာရီဝက်လောက်စိမ်ထားပြီး ခြေဖဝါးကို ဆားနဲ့ပွတ်တာ ပြီးတော့ပြောင်အောင်သဘက်နှင့်သုတ်လိုက်တယ် ဒူးအောက်ကနေ ရေနွေးလေးနဲ့ လောင်းပြီးဆေးလည်းရပါတယ် ကိုယ်မှာချွေးများထွက်လာပြီး ညောင်းတာကိုက်တာပေါ့သွားတယ် အပူလည်းတော်တော်ထွက်တယ် ဒီနည်းတိုင်း သုံးရက်လောက်
ဘွဲ့ရနှင့် ငါးစိမ်းသည် ဘယ်သူကပညာပိုတတ်လဲ ဖတ်ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပါ ဘွဲ့ရနှင့် ငါးစိမ်းသည် ဘယ်သူကပညာပိုတတ်လဲ ဖတ်ပြီးရင် ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပါ။ယနေ့မနက် ငါးကြော်လေးစားချင်လာသဖြင့် ဈေးထဲကို ငါးဝယ်ရန်ရောက်လာသည်။ ကျွန်တော် ဝယ်နေကျ ငါးဆိုင်ရှိသည် ။ ငါးကြင်းတစ်မျိုးတည်းရောင်းပြီး ဖော်ရွေသည်။ ဝယ်သူအကြိုက် မညည်းမညူ လုပ်ပေးလေ့ရှိ သည်။ငါးရောင်းသူကို ငါးစိမ်းသည်ဟု ခေါ်ကြသည်။ ငါးစိမ်းသည်ဆိုသည်မှာ စွာတာတာ၊ ကက်ကက်လန်၊
News-Update | April 24, 2020
ကားသမားဘဝတွေကလဲ အန္တရာယ်များလိုက်တာ…ပေ ၈၀ အနက်ရှိသော လမ်းအောက်ကျသွားတဲ့ လွယ်ဂျာလမ်းက ကားတစ်စီး ကချင်​ပြည်​နယ်​၊မိုး​မောက်​မြို့နယ်​တွင်​ တရုတ်​နိုင်​ငံသို့ တင်​ ပို့မည့်​ ငှက်​​ပျောသီးတင်​​မော်​​တော်​ယာဉ်​တစ်​စီး ဘရိတ်​​ပေါက်​ပြီး လမ်း​ဘေးထိုးကျမှုဖြစ်​ပွားခဲ့​ကြောင်း သိရသည်​။ ဖြစ်​စဉ်​မှာ ဧပြီ ၂၄ ရက်​ နံနက်​ ၁၀ နာရီခန့်​က ​ကျော်​မြင့်​ ​အောင်​(၂၅)နှစ်​၊သုံးမိုင်​ကွက်​သစ်​၊ဗန်း​မော်​မြို့​နေသူ ​မောင်းနှင်​ လာသည့်​ KCN-2B/—- (၁၂)ဘီး​မော်​​တော်​ယာဉ်​သည်​
ကိုဗစ်ကာလမှာ အိမ်မှာနေပြီး သားတွေမပျင်းအောင် တောင်တက်နံရံတစ်ခုဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ ဖခင် လက်ရှိအချိန်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID 19 ကူးစက်ရောဂါကြောင့် စာသင်ကျောင်းတွေ အကုန်လုံးပိတ်ထားရပြီး ကလေးတွေလည်း အိမ်ထဲက အိမ်အပြင်မထွက်ပဲ အိမ်မှာချည်းပဲ နေနေရပါတယ်။ ကြာလာတာနဲ့အမျှတော့ ကလေးတွေအနေနဲ့ အိမ်က ပျင်းစရာနေရာကြီး ဖြစ်လာမှာပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် မိဘဖြစ်သူတွေက ကိုယ့်ကလေးတွေ အိမ်မှာနေရတာပျော်အောင် တစ်ခုခုဖန်တီးပေးသင့်ပါတယ်။ အခုလည်း
တရုတ်နိုင်ငံမှ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ၌ လုပ်ငန်းအောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးပြီဖြစ်၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာ မြန်မာနိုင်ငံ COVID-19 ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းအား ကူညီရန်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံမှ စေလွှတ်သော အဖွဲ့ဝင် (၁၂) ဦးပါဝင်သည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲ့သည် တာဝန်အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးပြီဖြစ်၍ ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့မှ ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်သံအမတ်ကြီး Mr.
တရုတ်နယ်စပ် အရေးပေါ်ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန် နယ်စပ်နေအများပြည်သူတို့ သိရှိနိုင်ရန် လက်ဆင့်ကမ်းမျှဝေပေးပါ တရုတ်ပြည် ရွှေလီအစိုးရက နယ်စပ်ဒေသ ကျေးရွာအသီးသီးမှ ရပ်ကျေးပါတီအတွင်း ရေးမှူးများနှင့်အုပ်ချုပ် ရေးမှူးများကို ဆင့်ခေါ်၍ ယူနန်ပြည်နယ်အစိုးရ၏ အ ရေးပေါ်ညွှန်ကြားချက်ကို နယ်စပ်တလျှောက်တွင် နေထိုင်သောပြည်သူလူထုအများ သိရှိရန်ရှင်းပြသည့် အစည်းအဝေးကို ဒီကနေ့ (၂၃.၄.၂၀၂၀) ရွှေလီတွင်ကျင်း ပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး၌ ပြည်နယ်အစိုးရ၏ အရေးပေါ် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ကို
News-Update | April 18, 2020
One year isashort time. The times are very fast and the change of year is too fast. As the years have changed, the appearance of the
There is an English saying thatapicture is more effective thanathousand words. No one can say this is wrong. Half of the human brain is
News-Update | April 17, 2020
Paul Walker, who died in 2013, is known by many as Brian O’Connor in the Fast & Furious movie series. He owns 21 vehicles sold for $ 2.33